Annaga nagu saabsan - Shenzhen Margotan Technology Co., Ltd.
Kor u qaadida Isha
Tan iyo markii la aasaasay 2013, Shenzhen Margotan waxay si xirfad leh ugu takhasustay Naqshadeynta, Horumarinta iyo Soo saarista Qalabka Isticmaalka Guriga. Waxaan joognaa Shenzhen, oo leh gaadiid ku habboon.
Daboolaya bed dhan 3,000 mitir oo laba jibbaaran, hadda waxaan haynaa in ka badan 180 shaqaale ah, 2 class-10,000 workshops-free boodhka leh 5 khadadka la ururiyo iyo 10,000pcs 'wax soo saarka maalin kasta. Warshadayadu waxay ka gudubtay xisaabinta ISO9001, BSCI. Dhammaan alaabadayadu waxay leeyihiin CE, ROHS, FCC, shahaadooyin REACH iyo diiwaangelinta FDA.
Waxaan sidoo kale sii wadi doonaa codsiga shahaado suuqa kasta iyo codsiga macaamiisha. Imtixaankayaga si fiican u qalabaysan iyo tas-hiilaadyada wax soo saarka, iyo xeerarka xakamaynta tayada adag ee dhammaan heerarka wax-soo-saarka oo dhan ayaa noo suurtageliya inaan dammaanad qaadno tayada xasilloon iyo qanacsanaanta macaamiisha.
Waxaan inta badan diirada saarnaa burushka wajiga lagu nadiifiyo, masaajiyaha indhaha, rullaluistemadka wejiga iyo duugista wejiga galvanic. Dhammaan injineeradayada R&D waxay khibrad qani ah u leeyihiin aaladaha quruxda. Labadii sano ee la soo dhaafay, waxaan horay u soo saarnay 13 nooc oo cusub oo leh shatiyadayada waxaanan qorsheynay inaan sii deyno 5 nooc oo cusub sanadkan. Adeeg hal joogsi ah laga bilaabo aqoonsiga, Qaab-dhismeedka ilaa wax soo saarka ayaa la bixin karaa. Waqtigan xaadirka ah alaabooyinka waxaa loo dhoofiyay in ka badan 30 waddan oo adduunka ah, sida USA, Canada, UK, Germany, Italy, Russia, Japan, Singapore iwm. Shuraakadayada sharafta leh: L'Oreal, Mary Kay, Avon, Estee Lauder iwm.
Sannad kasta waxaan ka qayb-galnaa bandhigyada quruxda xirfadeed ee adduunka oo dhan, sida Cosmoprof Bologna, Las Vegas, Asia HK, Beauty Fair Japan, Cosmetech Japan, Expo Beauty Fair Mexico iwm. waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono hogaamiye joogto ah ee quruxda shakhsi ahaaneed & warshadaha daryeelka maqaarka.
Himilada: Ka caawi isticmaale kasta inuu had iyo jeer soo bandhigo muuqaalka ugu fiican.
Aragtida: Noqo hawl wadeenka summada ugu caansan ee Quruxda Shakhsiyeed & Aaladda Daryeelka Maqaarka.
Qiimaha: Daacadnimada Ganacsiga oo leh Mas'uuliyad weyn / Horumar joogto ah iyo Hal-abuurnimo / Waxtarka Sare / Wadashaqeyn-Win-Win.